2020 yepasi rose isina kuchena simbi inobuda inoderera ne0,9%
Mifananidzo yakaburitswa neWorld Steel Association inoratidza kuti kugadzirwa kwesimbi isina kugadzirwa pasi rose kwakasvika matani mabhiriyoni 1,86 pagore ra2020, kudzikira 0.9% kana ichienzaniswa ne2019.Asia yakaburitsa matani mabhiriyoni 1,37 esimbi isina kugadzirwa muna 2020, kuwedzera kwe1.5% zvichienzaniswa na2019. .Chinese cheshuga isina kugadzirwa producti ...Verenga zvimwe »
mutengo wesimbi hausati wagadzikana muChina
Mutengo wesimbi hausati wagadzikana muChina, kumusoro, pasi, kumusoro, pasi… Iyo USD / RMB mwero wekutsinhana hausiwo wakanaka, iwo mwero uri 6.44-6.46 nhasi. Iyo mbishi yezvinhu mutengo wemugwagwa mukuru wekuchengetedza kumusoro zvishoma, mutengo we kwakakurudzira simbi coils chengeta zvakafanana nezuro.Verenga zvimwe »
Iyo RMB yekutenda maitiro haasati asimbiswa, makambani ekutengeserana ekunze anofanirwa kudzivirira njodzi dzekutsinhana
Kwayaka: Times Zvemari Munyori: Yu Siyi Financial Times Munguva pfupi yapfuura, kuenderera kwekuonga kweRMB kwakonzera kunetsekana. Musi waGunyana 17, iyo yepakati parity yeRMB inopesana neUS dhora yakakwira nemakumi mashanu neshanu nongedzo kusvika 6.7675. Musi waGunyana 16, iyo yepakati parity yeRMB inopesana neUS dhora yakakwira ne ...Verenga zvimwe »
China simbi yemutengo maitiro munaGunyana 2020
1. Kuongorora Kwemusika Muna Nyamavhuvhu 2020, iyo yemumba simbi mutengo wakachinja zvishoma. Kubva munaAugust 30, indekisi yemutengo wesimbi yakavharwa pa3940, kuwedzera makumi mashanu kubva pakupera kwemwedzi wapfuura. Zvikurukuru, muna Nyamavhuvhu, inoenderera yakakwira tembiricha yemamiriro ekunze yakatekeshera nenyika, yakadzika rwizi ...Verenga zvimwe »
New chigadzirwa FRP epurasitiki nemakadhibhokisi jira
Shandong Baimiao yakavaka nyowani yekugadzira tambo ye FRP epurasitiki yekukwirisa jira muna Chikumi wa2020 gore, iko kugadzirwa kwegore kuri 2,000,000 metres, kazhinji inogadzira mafungu chimiro uye trapezoid chimiro, yakajeka, inoshanduka, yakajeka imwe. Zvakanakira FRP Washington City Offices nemakadhibhokisi jira: (1) Chiedza transmitta ...Verenga zvimwe »
Shandong Essar Kunze uye Export Trading Co, Ltd.